Amathrendi Wokwakhiwa Kwe-Digital Digital ka-8 | Martech Zone
Amathrendi Wokwakhiwa Kwe-Digital Digital ka-8
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 14, i-2017 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 14, i-2017 Douglas Karr
I-Coastal Creative wenza umsebenzi omuhle ukugcina phezulu kwamathrendi wokuqamba ngokubeka i-infographic enhle unyaka ngamunye. U-2017 ubukeka njengonyaka oqinile wamathrendi wokuklama - ngiyabathanda bonke. Futhi sifake okuningi kwalokhu kumakhasimende ethu ngisho nokwethu isiza se-ejensi.
Ngonyaka wesithathu zilandelana, sikhiphe uhlobo olusha sha lwemiklamo yethu ethandwayo ye-infographic yango-2017. Yize kunemigomo yokuklama esebenza kuyo yonke indawo futhi engaphelelwa yisikhathi, nakanjani kukhona izitayela ezishintsha minyaka yonke njengoba umkhuba uguquka. Okunye kwalokhu kuthambekela kungabamba futhi kube yingxenye yezimiso ezingaphelelwa yisikhathi, kanti ezinye zizobuna. Ake sibheke esakubona ngo-2016 esilindele ukuqhubeka nokuthandwa, nokuthi yini esingayilindela ngo-2017.
Amathrendi Wokwakhiwa Kwewebhusayithi ka-2017
Idizayini Yekhadi - Ukuzulazula okubukwayo kuya ngokugqama kakhulu kumasayithi izivakashi ukuthi zibheke kalula futhi zithole abakudingayo.
Umshini Omkhulu Wokubhala Ngokugqamile - ukuthayipha okukhulu nokugqamile kumklamo wesimanje kuyathandwa.
Imibala Yokuphonsa Emuva - imibala emisha neon eyisisekelo idlula amaflethi namathoni omhlaba abelokhu athandwa eminyakeni embalwa edlule.
Izithonjana Ezincane - Izithonjana ezincane, ezingabonakali ezinemigqa emincane zikhula ukuthandwa ngaphezu kwezithonjana ezinemininingwane.
Ama-Neon Gradients - ukwengeza ukujula kwama-logo nama-accents anemibala eqinile ye-neon kuyindlela enhle yokugqama.
Ama-Retro-Pastels - ama-lilac, ama-baby blues, nama-pinks anemibala emhlophe ethambile ehlangene nemigqa eqinile yokwakha.
Izimo Ezinesibindi - Ama-polygoni, ubujamo obulinganayo, namaphethini wejometri engeza isikhalazo.
okwakhe - imidwebo nemifanekiso inikeza okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele.
Enye yamasayithi engiwathandayo anemidwebo engiwavakashele kulo nyaka Ingadi Party Botanical Hard Sodas. Uma usufake iminyaka engaphezu kwengu-21, lungela okuhlangenwe nakho okumangalisayo.
Tags: 2017ingane bluesimibala eyinhloko enesibindibobunjwa abanesibindiukubhala ngesibindiukwakheka kwekhadiimibalaizitayela zokuklamaimidweboimibala edgyimibala enamandlaiphathi wensimuubujamo bejometriimidwebo yezithombeizitayela zezithonjanaimifanekisolilacsi-neonAma-gradients we-neonukuqalaama-pastelsamaphinkiizithonjana ezincaneukunyathelisa
Ngabe Ezokuxhumana Ziphoqa Abakhangisi Kude neMass Media?
Mar 5, 2015 ku-2: 46 PM
"Zicabange uqasha umuntu ozomela abathengisi bese ubakhokhela inyanga yomsebenzi wabo bese ubayeka bahamba - ulindele ukuthi izinguquko ziqhubeke nokungena." Lokhu kuyiqiniso - amaklayenti / i-ejensi kudingeka babhekane namaqiniso ngohlelo futhi bangalindeli ukuthi kwenzeke izinto ezimangazayo ngenyanga eyodwa. Kudingeka kubekwe izisekelo. Okuthunyelwe okuhle uDoug!